5 Kumele-Bona Izibonelo Zokushicilela NgeDijithali | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 19, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kade sazama iklayenti lethu, Ama-Zmag, kwamanye amaklayenti nombukeli wabo kupholile kakhulu. Bengifuna ukukhombisa izibonelo ezithile, zalokho engikukholelwayo, ezinye izinhlelo zokusebenza ezisebenzisanayo zedijithali! Ukuvula umbukeli, mane uchofoze kusikrini sesibukeli!
Amaklayenti womkhiqizo we-Zmags Commerce Pro abona imiphumela emihle, kufaka phakathi i- 5x ukwanda ekubukweni kwamakhasi, Isikhathi esingu-2x esisetshenzisiwe esizeni, kuze kufinyelele ku 2x phakamisa ngamanani wokuguqulwa futhi Ukukhuphuka okungama-55% ngenani elijwayelekile le-oda!
I-CVS Caremark - Ividiyo, amakhasi asebenzisanayo… umbukiso okhazimulayo!
Ngaphakathi Ukupakisha - ngakwesokunene kukhona konke ukushicilelwa kwangaphambilini!
Ukudla kwanamuhla nokudla okunomsoco - ophumelele kuma-DMA Digital Magazine Awards, lo magazini osebenzisana wedijithali kumele abonwe… ngezikhangiso ezisebenzisanayo namavidiyo ashumekiwe.
Umagazini weSeli C - Ukusetshenziswa okuyingqayizivele kakhulu kwezikhangiso ezisebenzisanayo ezidijithali. Bheka inketho yeJust for Boys, Just for Girls ekhasini 10!
Abanye abathengisi basebenzisa ukushicilelwa kwedijithali ngqo kusayithi labo! Bheka incwadi yokubheka impahla kaDick's Sporting Goods… ihlanganiswe ngokuphelele nohlelo lwazo lwe-ecommerce, umbukeli ukhombisa izigcawu ezisebenzisanayo. Chofoza kuphawu oluthi + futhi ungangeza into ngqo kuyo inqola yakho yokuthenga!
Esinye isici esihle se-Zmags ukuthi ungashumeka ikhodi yakho ye-Google Analytics UA futhi empeleni ulinganise ukusetshenziswa nokuxhumana kokushicilelwa kwakho kwedijithali.
Tags: umagazini digitalukushicilelwa kwedijithaliipulatifomu yokushicilela yedijithaliumagazini osebenzisanayoukuhweba ngemagaziniukuhweba ngemagazini i-ecommerce